UNCHR “Labo bil gudahood Qaxootiga Kenya jooga waa la celinaa” – idalenews.com
UNCHR “Labo bil gudahood Qaxootiga Kenya jooga waa la celinaa”
War kasoo baxay Xafiiska hay’adda QM,uqaabilsan xaga Qaxootige ee UNHCR, ayaa waxa lagu sheegay in bilaha nagu soo fuuda leh ay bilaabi doonan daad gureynta qiyaastii 3,000 oo Qaxooti Soomaali ah.oo kunool Xeryaha Qaxooti ee dalka Kenya.
Sarkaal hay’adda ka tirsan ayaa laga soo xigtay in dadkaasi ay iyaga ay ka dalbadeen in dalkooda lagu celiyo,islamarkaan howlgall-kaasi uu bilaaban doono ka hor inta uusan idlaan sanadkaan aynu ku guda jirno sida uu hadalka u yiri.
Bishii January ee sannadkan, waxay Hay’adda UNHCR samaysay qaab ay isku diiwaan gelinayaan Qaxootiga doonaya inay ku soo laabtaan dalkooda Soomaaliya,waxaa ayna sii raaciyeen in ay diiwaangaliyeen 3,020 qaxooti ah.
Warbixin Hey’adda QM uqaabilsan dhanka Qaxootiga ee UNHCR,ayaa waxaa ay dhawaan ku sheegen in Q.M iyo maamulka Jubba ay iska kaashan doonaan in deeganada maamulka Jubba uu ka arimiyo in la dejiyo qaxooti dalbaday in dalkooda dib loogu celiyo.
Shaqaaqo Dhaawac sababtay oo maanta ka dhacday Gudaha Dekada Xamar.
Dhegeyso: Maamulka Cabdi Qaydiid oo Ku Hanjabey inay Joojinayaan Gawaarida U Socoto Degaanada Puntland